Iindevu zeHipster njengenye yeendlela ezikhoyo zefashoni | Amadoda aQinisekileyo
Amadoda akhulisa iindevu ahlala esenza njalo nje kuphephe ukucheba.
Ukunxiba iinwele zobuso kuxhomekeke kwisitayile esamkelweyo, ngumsebenzi onokufuna oko umsebenzi omninzi kunye nomzamo kunokucheba yonke imihla. Kwaye ukuba kukho uhlobo lweendevu olufuna ingqalelo kwiinkcukacha, yiHipster.
1 Imvelaphi kunye neempawu zentshebe yeHipster
2 Ungasicacisa njani isitayile
Imvelaphi kunye neempawu zentshebe yeHipster
"Iingcali" kwifashoni yamadoda azivumelani kwaphela imvelaphi yentshebe yehipster. Ukuba kukho nantoni na, kubonakala ngathi zimbini iindlela:
Ithiyori yokuqala: Iindawo ezisemaphandleni eUnited States, esetyenziswa ngabagawuli bemithi kunye nabanini mhlaba.
Ithiyori yesibini: kwiVictorian London, ethandwa ngamanenekazi afundileyo esiNgesi.
El Isitayile selizwe siba rougher kwaye zenzeke ngokukhawuleza. Ezinye iinkcukacha zithathelwa ingqalelo kwiindevu, ezinjengokuzisondeza okanye nokuzandisa nokuzisonga, ngokwesiko lakudala leenkomo neenkomo zekhulu le-XNUMX nele-XNUMX kwinxalenye yoMntla Merika.
Uhlobo lwedolophu lubonakala ngakumbi. Kufuneka icaciswe rhoqo kusetyenziswa isikere. Iyonyusa ivolumu ukusuka kwi-sideburns ide ide ibe nde ixesha elingaphantsi kwesilevu. Nkqu nakwinxalenye ephezulu yobuso, kukho abo bayinxiba ngekhefu elincinci phakathi kweenwele kunye neenwele zobuso, ukwahlula enye kwenye.
Ungasicacisa njani isitayile
Into yokuqala kukuyeka iindevu zikhule. Ayizizo zonke iimeko ezifanayo, kodwa ithatha malunga iiveki ezintandathu de kuqale ukubumba. Into ekucetyiswa ukuba ikwenze ngeli xesha kukunika ngokuthe ngcembe imilo oyifunayo.
Iimfuno zeHipster Beard ikhalenda yokhathalelo kumele ukuba kuzalisekiswe. Ukusetyenziswa kweeshampu kunye nezinye iimveliso ezizodwa kuyacetyiswa, ukugcina ukukhanya kunye nokuhambisa isikhumba sobuso.
Ayisiyo isitayile seendevu ekucetyiswa ukuba yenziwe ngabantu iinwele zobuso azikhuli kakhulu okanye ngokulinganayo.
Imithombo yemifanekiso: INmendoza / Izixhobo zombane
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Chetyiwe » Umkhwa weFashoni: Iindevu zeHipster
Iingcebiso zokufundisa umntwana wakho ukuqubha
Xa ukuthengisa kuqala